विशाल ग्रुपका उत्पादनमा वाणिज्य विभाग र प्रहरीको छापा, विशाल गु्रपका बैंक र वित्तिय संस्थामा विसंगती र विकृतीले सीमा नाघ्योः राष्ट्र बैंक बेखबर ? - Aathikbazarnews.com विशाल ग्रुपका उत्पादनमा वाणिज्य विभाग र प्रहरीको छापा, विशाल गु्रपका बैंक र वित्तिय संस्थामा विसंगती र विकृतीले सीमा नाघ्योः राष्ट्र बैंक बेखबर ? -
नेपालमा यस्तो एउटा समूह छ । उसलाई नेपालको कुनै कानुन लाग्दैन भन्दा पत्याउन गाह्रो होला तर, यो सत्य सावित बन्दै गएको छ ।
जुन पार्टी सत्तामा आएपनि विशाल ग्रुपको अगाडी निरिह बन्दै आएका घटना हामी सामू छन् । विशाल ग्रुपको लगानी भएका बैंक, वित्तिय संस्था बीमा कम्पनीहरु, अटोमोबाइल, शैक्षिक संस्थाहरु सधैं जस्तो विवादमा फस्दै आएका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
विशाल ग्रुपको सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको नेपालकै धेरै शाखा सञ्जाल र ग्राहक भएको एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड माथी तत्कालीन अवस्थामा बैंकाइन्स्योरेन्सको दुरुपायोग गर्दै ऋणीलाई जबरजस्ती बीमा गराएको मनोमानी रुपमा अरु बैंक भन्दा फरक देखाउन ब्याजदर दिन दुई गुणा रात चौगुणा बढाउने गरेको बचतकर्ताहरुलाई सबैभन्दा कम ब्याजदर दिएको, अर्को महत्वपूर्ण कुरा कोरोना महामारी बीच हजारौं करारका निरिह कर्मचारीलाई हटाएको पूराना नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई चुनौती दिने भन्दै नक्कली वित्तिय विवरण देखाएको चर्को आरोप लाग्दै आएको छ ।
विशाल गु्रपकै एलआईसी, प्रुडेन्सीयल इन्स्योरेन्स समेत कर्पोरेट सुशासन बाहिर गएर चलिरहेको भेटिएको छ । यतिमात्र होइन व्यवसायिक घराना विशाल ग्रुप सबै भन्दा बढि चर्चा र विवादमा आउने गु्रप हो भन्दा अब फरक पर्दैन ।
नेपालमा अहिले कोरोना भाईरसको महामारी छ । जनता पीडामा छन् । देश पीडामा छ । हुनेको चुलो बलेको छ । तर, हुँदा खानेहरुको चुलो बलेको अझै छैन। यहि मौका छोपी विशाल गु्रपले म्याद सकिएको विषाधी खाद्य बस्तु बजारमा पठाएर जनतालाई अकालमै मार्ने गरेको तथ्य हालै फेला परेको छ ।
विशाल गु्रपबाट उत्पादित म्याद सकिएका चक्लेट, बिस्कुट, आलुका चिप्सका साथै खाद्य बस्तु बजारमा विक्री भएको पाएपछि प्रहरी र वाणिज्य विभागले छापा मारी ८ जनालाई पक्राउ गरेको छ । भने करोडौंको सामान बरामत गरेको भेटिएको छ । यो कस्तो समूह हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? कोरोना भाइरसले होइन विशाल गु्रपका उत्पादनले हामी मर्ने हो कि भन्ने शंका बढेको छ ।
नेपालको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपपले म्याद सकिएका चलकेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता खाद्य वस्तुहरु बजारमा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा नयाँ बानेश्वरको संयुक्त अप्रेशनमा नेपालीको जनस्वास्थ्यमाथि विशाल ग्रुपले गरेको यस्तो गम्भीर अपराध गरेको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
वाणिज्य विभागले गत बिहीबार कंलकी, बाफल र कालीमाटीका तीन घरलाई शिल गरेको छ । बजारबाट म्याद सकिएर र्फिता भएका चलकेट, बिस्कुट, आलु चिप्स जस्ता खाद्य वस्तुहरु उक्त स्थानमा नयाँ म्याद राख्ने गरेको भेटेपछि तीन घरलाई शिल गरिएको भेटिएको छ ।
कंलकीको लिंकरोडमा रहेको तीनतले घरमा गैरकानुनी कार्यहरु हुने गरेको उजुरीको आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र वाणिज्य विभागले संयुक्त टोलीको छापा मारेको हो। म्याद सकिएका खाद्य वस्तुको पुन नयाँ म्याद राख्दै गरेको अवस्थमा छापा मारेर मेसिन सहित संलग्नलाई रंगेहात प्रक्राउ गरिएको विभागका उच्च अधिकृतले पंक्तिकारसंग बताए ।
खाद्य पदार्थको वितरण गर्ने आयन इन्टरनेश्नलका प्रमुख रहेका भारतीय नागरिक रोशन बात्रासहित ८ जनालाई प्रक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग दरबारमार्गमा राखिएको विभागले जनाएको छ ।
भारतीय नागरिक बात्राले कलंकी लगायतका तीन स्थानबाट रिप्याकिङ हुने गरेको जनाएपछि कालीमाटी र बाफलमा रहेका साढे ३ तले घरलाई शिल गरिएको जनाईएको देखिन्छ । तीनै स्थानमा घर भाडामा लिएर स्नेकर्स चकलेट, ओरियो बिस्कुट, प्रिङ्गल्स चिप्ससहित आधा दर्जन खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ म्याद राखेर बजार पठाउने गरेको प्रहरीले पंक्तिकारलाई बताए । यो कस्तो व्यापार हो प्रधानमन्त्रीज्यू, किन कारबाही हुँदैन ?
पुनः म्याद राखेर बजार पठाउन तयारी अवस्थामा रहेको तीन गाडीलाई समेत नियन्त्रणमा लिईएको विभाग स्रोतले जनाएको छ । प्रारम्भिक चरणमा २ कम्पनीको संलग्नता रहेको र अन्यको खोजी कार्य भैरहेको जनाईएको छ ।
आयन डिष्ट्रिब्युटर लोकल वितरक रहेको तथा विशाल गुप्र युनाइटेड डिष्ट्रिब्युटर र लाइफ केयर इन्टरनेशनलबाट खरिद गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको वाणिज्य विभागका उच्च कर्मचारीको दाबी छ ।
स्निकर्स, ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, मार्स चकलेट, किल्डे, बण्टी तथा मिल्की र प्रिङ्गल्सको नेपाल आयातकर्ता विशाल समूह रहेको र यसको भगिनी संस्था युनाइटेड डिष्ट्रिब्यूटरले बजारमा यी सामान फैलाउने काम गर्ने गरेको अनुसन्धानमा प्रहरी उच्च स्रोतको दाबी छ ।
केही महिना अगाडी भारतको कानपुरबाट उत्पादित बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड ब्रिटानियाको बिस्कुटमा कीरा भेटिएको थियो । ब्रिटानियाको ‘गुड डे कुकिज’ बिस्कुट खान लाग्दा किरा भेटिएको काठमाडौँका एक उपभोक्ताले उजुरी नै दर्ता गरेका थिए ।
काठमाडौंका ४० वर्षीय एक व्यक्तिले पसलबाट किनेर उक्त बिस्कुट खान लाग्दा त्यसमा कीरा भेटिएको बताएका छन् । उनले बिस्कुट सडेको र त्यसमा कीरा रहेको भिडियो नै बनाएका छन् । गुड डेमा काजु मिलाइएको हुन्छ, जसकारण नेपालमा यसको मूल्य पनि महंगो पर्छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती व्यक्तिले बताएका छन् कि यसै साल फेब्रुअरी १८ तारिख उत्पादन मिति रहेको उक्त बिस्कुट खोलेर खान लाग्दा कीरा भेटिएको हो । बिस्कुटमा खान हुने अवधि एक वर्ष उल्लेख गरिएको पनि उनले बताए । म्याद १ वर्ष भनिए पनि प्याकिङ गरिएको तीन महिनामै बिस्कुट अखाद्य हुनुले नेपालमा बहुराष्ट्रिय ब्राण्डको नाममा ठगी भइरहेको उनीले पंक्तिकारलाई बताए ।
नेपालमा गुड डे बिस्कुटको आयातकर्ता र अधिकृत बिक्रेता विशाल गु्रप रहेको छ । विशाल ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अशोककुमार अग्रवाल हुन्, उनी केही महिनाअघि मात्र जुवाखालबाट रंगेहात समातिएका विवादित जुवाडे व्यवसायी हुन् ।
भारत र नेपालमा फरक उपभोग मिति भएको बस्तु विशाल गु्रपले बिक्री गर्दै आएको फेला परेको छ । के उसलाई नेपालको कानुन लाग्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू ?
बिस्कुटमा कीरा भेटिएको भिडियो प्राप्त भएपछि उक्त गुड डे बिस्कुटबारे बुझ्दै जाँदा नेपाल र भारतमा उपभोग मिति नै फरकफरक राखिएको भेटिइएको छ । सोही भारतमा भने उपभोग गर्न हुने अवधि ६ महिना छ । तर नेपालमा भने एक वर्ष लेखिएको बिस्कुटको खोलमै छ यस तथ्यबाट उत्पादक संस्था र बिक्रेताले विशाल गु्रपकै कारण नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको तथ्य उजागर भएको छ । यसरी दुई देशमा उपभोग्य मिति नै फरक राखेर बिक्री गर्नु कर्पोरेट नैतिकताविरुद्ध रहेको ती व्यक्तिले बताए । यो कस्तो समूह हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
नेपालको कानुनलाई चुनौती दिँदै खाद्य पदार्थ देखि बैंक, वित्तिय संस्थमा लुट मच्चाउदै आएको विशाल गु्रपलाई कसले कारवाही गर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू । यसको उत्तर हामी निरिह जनतालाई कसले दिने हो हामी उत्तरको प्रतिक्षामा छौं । सचेत भया ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा ऋणपत्रको कारोबारमा जोड
कामना सेवाकोे ८४औं शाखा स्याङ्गजाको झलुङ्गेमा
महराबारे रोशनी शाहीको त्यो खुलासा